တဈစုံတဈယောကျနဲ့ အတူနခေဲ့ပီးလို့ မသနျ့တော့ပါဘူး ဆိုပွီး စိတျညဈနတေဲ့ မိနျးကလေးမြား ဖတျရနျ…မဆိုငျသူမြားမဖတျရ.. – Shwe Naung
ကောငျး ပါပွီ မပွော ခငျ ကြှနျတေျာ့ ကိုကြှနျတျော မိ တျဆ ကျပေးပါရစေ။ တဈခါတဈခါမှာ ပွောပွတဲ့လူအကွောငျးကိုသိခွငျးဟာပွောမယျ့ စကားကို ပိုပွီးလေးနကျစေ တယျထ ငျမိလို့ပါ။
ကြှနျတျော Minctionary ပါ။ ဒီကလော ငျနာ မညျနဲ့အတူ နာမညျကွီးခဲ့တာက ပှငျ့ကွဖေတျကွှဆေိုတဲ့ ဇာတျလမျးလေးတှပေါ။ မိနျးကလေးေ တှဖကျက အလိုမလို ကျဖို့ကိုယျ့ဂုဏျ ကိုယျမွှငျ့ဖို့အေ ကွာငျး ယောကြာင်္းယု တျတှအေကွောငျး အ သိပေးခဲ့တဲ့ ဇာတျလမျးတှဲလေးတှပေါ။
နောကျပိုငျးမှာ ဒီအကွော ငျးတှဘေဲအပျကွော ငျးထပျပွီး တဈရာ ဖိုးသုံးပုဒျ stupidity တှဘေဲဖွနျ့မိသလိုဖွဈမှာစိုးတာရယျ။ ဘဝမှာအခကျအ ခဲဆုံးကာ လဖွဈခဲ့ရတာေ တှရယျ။ လာတိုငျပငျကွတဲ့ လူအမြားစုရဲ့ဇာတျ လမျးပေါငျးစုံ ကွားထဲမှာ စိတျတှညေဈညူးလာ တာတှရေ ယျကွောငျ့ ဆကျမရေးဖွဈသေးတာပါ။
ပွီးတော့ Page မှာတငျ တိုငျး ကိုယျ့အကော ငျ့ကိုလူမသိစဘေဲ page သကျသကျ သာတငျပါတယျ။ တကယျ၍သာ အကောငျ့နဲ့တှဲပွီးတငျမယျ ဆိုရငျကြှနျတျောလညျး ဆယျလီ ဆယျ့တဈလီ တဈဦးဖွဈမယျ ဆိုတာ သိစခေငျြပါတယျ။
ကြှနျတျောမကွို ကျဆုံးက သူနဲ့အိပျပွီးလို့ မသနျ့တော့ပါဘူး ဆိုတာကိုဘဲ။ အဲ့ဒါကဘာမသနျ့ တာကိုပွောခငျြ တာလဲမသိဘူး။ HIV ကူးလာလို့လား ဒါမှမဟုတျ sexually transmitted disease ( STD ) တှကေူးလာလို့လား။
မိနျးကလေး တိုငျးဟာ ကိုယျ့အပြိုဂုဏျ ကိုယျစောငျ့ထိ နျးသငျ့တယျ။ ယဉျကြေးမှု ဆိုတာကိုထား လူသားတဈယောကျအနနေဲ့ ကိုယျ့ဘကျက အနဈနာကွီးဘဲလို့ဆရာဝနျအေ တျာမြားမြား သတိပေးကွတယျ။ လူတိုငျးနီးပါးလဲ သိကွတယျ။ ခကျတာက အထိအတှေ့ နဲ့ဆှဲဆောငျ မှုကိုမလှနျဆနျနိုငျကွဘူး။
ဘယျလောကျခြ ဈပါတယျ လကျထပျပါ့မယျပွောပွော အခြိနျတ နျငွီးငှပွေီ့း ကနျထုတျသှားတဲ့ အခါမိနျးကေ လးဘကျကတဈ ဆငျ့နိမျ့ခံကွရတယျ။ ငွငျးမ လား။ ရှိပါသေး တယျ။ သူလညျးသူ့ဆန်ဒပွညျ့ ကိုယျလညျး ကိုယျ့ဆန်ဒပွညျ့မို့ ယောကျြား မိနျးမခှဲနာစ ရာမရှိပါဘူး။ ဘယျသူ့မှမ နဈနာပါဘူးဆိုသူ သောကျရူးမြားကလဲ အမြားသား ။ထားလိုကျပါ ။
ခတျေအခါ ကိုက ယောကျြားသား မြားကလဲ အတငျးဆှဲဆော ငျလှနျးတဲ့အခါ ခဈြတာတဈခု တညျးနဲ့မကျြစိစုံမှိတျ ပေးပွီးတဲ့အခါယူသှားတဲ့လူကလဲ စားပွီးနားမလညျ …. ဝါးပွီးထှေးထုတျ သှားတဲ့အခါ ကြှနျမကိုယျကမ သနျ့တော့ပါဘူး မဖွူစငျတော့ ပါဘူးဆိုနကွေတဲ့မိ နျးကလေးမြား ကြှနျတျောထပျမေးပါ့မယျ။
HIV ကူးလို့လား။ လိငျကတဈဆ ငျ့ကူးစကျတတျတဲ့ေ ရာဂါဆိုးတှေ STD တှကေူးစကျ လာလို့လား။ ဘာကိုမသ နျ့ရမှာလဲ။ ဘာကိုကိုယျက လူ့အသိုငျးအဝိုငျးမှာ မကျြနှာငယျရမှာလဲ။ အပျေါကရောဂါတှေ ကူးလာတယျဘဲ ထားပါတော့။ ခငျဗြားဟာ အသနျ့ဆုံးမိ နျးကလေးတ ဈဦးပါ ဘာလို့လဲသိသား ။ ခငျဗြားဟာခြ ဈတဲ့စိတျတဈခုနဲ့ပုံအပျပေးခဲ့တာ။
ရာထူးရဖို့ ထဘီ လှနျပေးလိုကျတာ ခွူစားဖို့အ တှကျခြှတျပေးလို ကျတာကြျေွာ ကားမှုအတှကျ အရှကျကုနျခဲ့တာ လုံးဝမဟုတျလို့ဘဲ။ ပဈသှားတဲ့လူ ကပဈသှားတယျ ဆိုရငျ နခေဲ့ရမယျ့လူ အနနေဲ့လညျး ဘဝလမျးကိုဆကျေ လြှာကျသှား ဖို့လိုတယျ။ ဘာဖွဈလဲ။ ဘာဖွဈလို့ သူ့အလှ နျကွောငျ့ ကိုယျကမကျြနှာငယျရမှာလဲ။
ဒီလိုပွောဖို့ ကိုယျကအ ပြိုမဟုတျဘူးဆို တာကွငွောမောငျးခတျေ နဖို့ပွောတာမဟု တျဘူးပေါ့။ ထပျတှရေ့မယျ့ လကျတှဲဖျောက ပွောလို့ရရ ငျပွောပွောလို့မရ ဘူးထငျရငျမပွောနဲ့ပေါ့ဘာဖွဈလဲ။
ခငျဗြားအပြိုမ ဟုတျတော့ရော ဘာဖွဈလဲ။ တကယျရှကျရ မှာကပေးရ တဲ့လူလား။ မကျြနှာပွောငျတိုကျ အခြောငျနှိုကျသှား တဲ့ကောငျက ရှကျရမှာလား။နလေိုကျစမျးပါ ခေါငျးမော့ပွီး။ ငါတဈယောကျဘယျ လိုမှဆကျေ လြှာကျသှားဖို့ မဖွဈဘူးမတှေးပါနဲ့။ ကြှနျတေျာ့ဆီ လာတိုငျပငျကွတဲ့မိ နျးကလေး အတျောမြားမြား အဲ့လိုကွုံ ဖူးကွပါတယျ။
ဖွဈခါစ ခံစားရခါစ ကတော့ မနညျးဖြောငျးဖြေ ပးခဲ့ရပမေယျ့ အထိုငျ ကသြှားတဲ့အခါ ပြျောရှငျစရာ ဘဝတှပေိုငျဆိုငျထားကွတာ ကြှနျတျော သကျသအေဖွဈ အမြားကွီးပွနိုငျပါတ ယျ။တျောသေးပွီ။
နောကျတဈခါ ကြှနျမကမသ နျ့တော့ဘူးဆိုတဲ့ စကားမကွားခငျြေ တာ့ပါ။ ကိုယျ့ဘဝကိုယျ ထိနျးသိမျးနိုငျပါေ စ။ဖွဈပွီးသှားရ ငျလဲဘဝကိုရငျေ ကာ့ပွီးလြှောကျ လှမျးနိုငျကွ ပါစေ။
စတေနာ မတ်ေတာမြားစှာဖွငျ့ မူရငျးရေးသားသူ.. မငျးထကျလှငျ (Minctionary)ထံမှ ကူးယူဖျောပွပါသညျ
ကောင်း ပါပြီ မပြော ခင် ကျွန်တော့် ကိုကျွန်တော် မိ တ်ဆ က်ပေးပါရစေ။ တစ်ခါတစ်ခါမှာ ပြောပြတဲ့လူအကြောင်းကိုသိခြင်းဟာပြောမယ့် စကားကို ပိုပြီးလေးနက်စေ တယ်ထ င်မိလို့ပါ။
ကျွန်တော် Minctionary ပါ။ ဒီကလော င်နာ မည်နဲ့အတူ နာမည်ကြီးခဲ့တာက ပွင့်ကြေဖတ်ကြွေဆိုတဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးတွေပါ။ မိန်းကလေးေ တွဖက်က အလိုမလို က်ဖို့ကိုယ့်ဂုဏ် ကိုယ်မြှင့်ဖို့အေ ကြာင်း ယောကျာင်္းယု တ်တွေအကြောင်း အ သိပေးခဲ့တဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲလေးတွေပါ။
နောက်ပိုင်းမှာ ဒီအကြော င်းတွေဘဲအပ်ကြော င်းထပ်ပြီး တစ်ရာ ဖိုးသုံးပုဒ် stupidity တွေဘဲဖြန့်မိသလိုဖြစ်မှာစိုးတာရယ်။ ဘဝမှာအခက်အ ခဲဆုံးကာ လဖြစ်ခဲ့ရတာေ တွရယ်။ လာတိုင်ပင်ကြတဲ့ လူအများစုရဲ့ဇာတ် လမ်းပေါင်းစုံ ကြားထဲမှာ စိတ်တွေညစ်ညူးလာ တာတွေရ ယ်ကြောင့် ဆက်မရေးဖြစ်သေးတာပါ။
ပြီးတော့ Page မှာတင် တိုင်း ကိုယ့်အကော င့်ကိုလူမသိစေဘဲ page သက်သက် သာတင်ပါတယ်။ တကယ်၍သာ အကောင့်နဲ့တွဲပြီးတင်မယ် ဆိုရင်ကျွန်တော်လည်း ဆယ်လီ ဆယ့်တစ်လီ တစ်ဦးဖြစ်မယ် ဆိုတာ သိစေချင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်မကြို က်ဆုံးက သူနဲ့အိပ်ပြီးလို့ မသန့်တော့ပါဘူး ဆိုတာကိုဘဲ။ အဲ့ဒါကဘာမသန့် တာကိုပြောချင် တာလဲမသိဘူး။ HIV ကူးလာလို့လား ဒါမှမဟုတ် sexually transmitted disease ( STD ) တွေကူးလာလို့လား။
မိန်းကလေး တိုင်းဟာ ကိုယ့်အပျိုဂုဏ် ကိုယ်စောင့်ထိ န်းသင့်တယ်။ ယဉ်ကျေးမှု ဆိုတာကိုထား လူသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ ကိုယ့်ဘက်က အနစ်နာကြီးဘဲလို့ ဆရာဝန်အေ တ်ာများများ သတိပေးကြတယ်။ လူတိုင်းနီးပါးလဲ သိကြတယ်။ ခက်တာက အထိအတွေ့ နဲ့ဆွဲဆောင် မှုကိုမလွန်ဆန်နိုင်ကြဘူး။
ဘယ်လောက်ချ စ်ပါတယ် လက်ထပ်ပါ့မယ်ပြောပြော အချိန်တ န်ငြီးငွေ့ပြီး ကန်ထုတ်သွားတဲ့ အခါမိန်းကေ လးဘက်ကတစ် ဆင့်နိမ့်ခံကြရတယ်။ ငြင်းမ လား။ ရှိပါသေး တယ်။ သူလည်းသူ့ဆန္ဒပြည့် ကိုယ်လည်း ကိုယ့်ဆန္ဒပြည့်မို့ ယောကျာ်း မိန်းမခွဲနာစ ရာမရှိပါဘူး။ ဘယ်သူ့မှမ နစ်နာပါဘူးဆိုသူ သောက်ရူးများကလဲ အများသား ။ထားလိုက်ပါ ။
ခေတ်အခါ ကိုက ယောကျာ်းသား များကလဲ အတင်းဆွဲဆော င်လွန်းတဲ့အခါ ချစ်တာတစ်ခု တည်းနဲ့မျက်စိစုံမှိတ် ပေးပြီးတဲ့အခါယူသွားတဲ့လူကလဲ စားပြီးနားမလည် …. ဝါးပြီးထွေးထုတ် သွားတဲ့အခါ ကျွန်မကိုယ်ကမ သန့်တော့ပါဘူး မဖြူစင်တော့ ပါဘူးဆိုနေကြတဲ့မိ န်းကလေးများ ကျွန်တော်ထပ်မေးပါ့မယ်။
HIV ကူးလို့လား။ လိင်ကတစ်ဆ င့်ကူးစက်တတ်တဲ့ေ ရာဂါဆိုးတွေ STD တွေကူးစက် လာလို့လား။ ဘာကိုမသ န့်ရမှာလဲ။ ဘာကိုကိုယ်က လူ့အသိုင်းအဝိုင်းမှာ မျက်နှာငယ်ရမှာလဲ။ အပေါ်ကရောဂါတွေ ကူးလာတယ်ဘဲ ထားပါတော့။ ခင်ဗျားဟာ အသန့်ဆုံးမိ န်းကလေးတ စ်ဦးပါ ဘာလို့လဲသိသား ။ ခင်ဗျားဟာချ စ်တဲ့စိတ်တစ်ခုနဲ့ပုံအပ်ပေးခဲ့တာ။
ရာထူးရဖို့ ထဘီ လှန်ပေးလိုက်တာ ခြူစားဖို့အ တွက်ချွတ်ပေးလို က်တာကျော်ြ ကားမှုအတွက် အရှက်ကုန်ခဲ့တာ လုံးဝမဟုတ်လို့ဘဲ။ ပစ်သွားတဲ့လူ ကပစ်သွားတယ် ဆိုရင် နေခဲ့ရမယ့်လူ အနေနဲ့လည်း ဘဝလမ်းကိုဆက်ေ လျှာက်သွား ဖို့လိုတယ်။ ဘာဖြစ်လဲ။ ဘာဖြစ်လို့ သူ့အလွ န်ကြောင့် ကိုယ်ကမျက်နှာငယ်ရမှာလဲ။
ဒီလိုပြောဖို့ ကိုယ်ကအ ပျိုမဟုတ်ဘူးဆို တာကြေငြာမောင်းခတ်ေ နဖို့ပြောတာမဟု တ်ဘူးပေါ့။ ထပ်တွေ့ရမယ့် လက်တွဲဖော်က ပြောလို့ရရ င်ပြောပြောလို့မရ ဘူးထင်ရင်မပြောနဲ့ ပေါ့ဘာဖြစ်လဲ။
ခင်ဗျားအပျိုမ ဟုတ်တော့ရော ဘာဖြစ်လဲ။ တကယ်ရှက်ရ မှာကပေးရ တဲ့လူလား။ မျက်နှာပြောင်တိုက် အချောင်နှိုက်သွား တဲ့ကောင်က ရှက်ရမှာလား။နေလိုက်စမ်းပါ ခေါင်းမော့ပြီး။ ငါတစ်ယောက်ဘယ် လိုမှဆက်ေ လျှာက်သွားဖို့ မဖြစ်ဘူးမတွေးပါနဲ့။ ကျွန်တော့်ဆီ လာတိုင်ပင်ကြတဲ့မိ န်းကလေး အတော်များများ အဲ့လိုကြုံ ဖူးကြပါတယ်။
ဖြစ်ခါစ ခံစားရခါစ ကတော့ မနည်းဖျောင်းဖျေ ပးခဲ့ရပေမယ့် အထိုင် ကျသွားတဲ့အခါ ပျော်ရွှင်စရာ ဘဝတွေပိုင်ဆိုင်ထားကြတာ ကျွန်တော် သက်သေအဖြစ် အများကြီးပြနိုင်ပါတ ယ်။တော်သေးပြီ။
နောက်တစ်ခါ ကျွန်မကမသ န့်တော့ဘူးဆိုတဲ့ စကားမကြားချင်ေ တာ့ပါ။ ကိုယ့်ဘဝကိုယ် ထိန်းသိမ်းနိုင်ပါေ စ။ဖြစ်ပြီးသွားရ င်လဲဘဝကိုရင်ေ ကာ့ပြီးလျှောက် လှမ်းနိုင်ကြ ပါစေ။
စေတနာ မေတ္တာများစွာဖြင့် မူရင်းရေးသားသူ.. မင်းထက်လွင် (Minctionary)ထံမှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်